Shabakad firfircoon iyo Viralstyle: Maareynta Kaqeybgaleyaasha iyo Badeecada | Martech Zone
Shabakad firfircoon sanadkiiba wuxuu socodsiiyaa ku dhowaad 100 milyan oo diiwaangalin ah iyo in kabadan $ 3B oo ah lacag bixinta in kabadan 47,000 abaabulayaasha iyo 200,000 waxqabadyo iyo dhacdooyin.
ACTIVE Network® waa hogaaminta suuqa caalamiga ah ee waxqabadyada iyo dhacdooyinka, isku xirka kaqeybgalayaasha iyo abaabulayaasha waxqabadka, iyada oo la siinayo sirdoon ganacsi oo aan noociisa aheyn iyada oo loo marayo xalalka xogta hogaamineysa warshadaha iyo fikradaha fikradaha ee ka caawiya qabanqaabiyaasha abaabulka kordhinta ka-qeybgalka iyo dakhliga.
Xalalkooda ballaadhan waxay ka kooban yihiin dhowr meelood iyo adeegyo:
SHAQO SHAQO - madal daruur la qaadi karo Sugan, xasilloon, oo dabacsan, HAWLAHA SHAQADA waxay bixisaa adeegyo iyo kaabayaal si ay u taageeraan ururada nooc kasta ha lahaadeene
Waxqabadka daruuraha - waxay bixisaa aragti ku saabsan dhacdooyinka xogta sirdoonka. Xal calaamadeysan oo kuu oggolaanaya inaad gaarsiiso isgaarsiin wax ku ool ah macaamiishaada intaad dabagal ku sameyneyso waxqabadkooda, taasoo awood u siinaysa faham qoto dheer oo ku saabsan halka, goorta iyo sida ay u doonayaan inay kaa maqlaan.
Hawlgal firfircoon - Xal u calaamadeysan oo kuu oggolaanaya inaad gaarsiiso isgaarsiin wax ku ool ah macaamiishaada intaad la socoto waxyaabaha ay kaqeyb qaadanayaan, taasoo awood u siinaysa faham qoto dheer meesha, goorta iyo sida ay doonayaan inay kaa maqlaan.
Mobile Apps - Xalal taxane ah oo dhaqdhaqaaqa moobiilka loogu talagalay in lagu dhexgeliyo isticmaaleyaasha dhammaadka ah ee kaqeyb gala dhacdooyinka.
Nidaamyada Waqtiga Jinsiyada - Xalalka waqtiga RFID ee loogu talagalay jinsiyadaha dhammaan cabirrada (TUHF)
XALAL XALAL Shabakad Ku dar
Barnaamijka Maareynta Jinsiyada - diiwaangelinta jinsiyadaha internetka iyo xalalka suuqgeynta si ay gacan uga geysato helitaanka kaqeybgalayaal badan, u maareeyaan munaasabadaha si fudud, iyo dhisida summad adag.
Maareynta Madadaalada Madadaalada - ACTIVE Net wuxuu caawiyaa waaxaha baarkinka iyo madadaalada, YMCAs, xarumaha aqriska xarumaha iyo xarumaha kale ee waxqabadka bulshada waxay kordhiyaan kaqeybgalka iyadoo la maareynayo diiwaangelinta, boos celinta, jadwalka, xarumaha, hubinta goobta, xubinnimada iyo inbadan.
Barnaamijka Maareynta Dibadda - HAWLAHA SHAQADA waxay bixisaa u hogaansanaanta iyo ilaalinta dhulka xerooyinka, marinnada, goobaha taariikhiga ah, adeegsiga maalinlaha iyo shatiyada xilliyada sida ugaadhsiga, kalluumeysiga iyo doonyaha.
Barnaamijka Maareynta Kaamka - Maamulaha Kaamku wuxuu xerooyinka ku hayaa si habsami leh, oo ay ku jiraan rugo caafimaad oo isboorti, fasalo farshaxan, barnaamijyo waxbarasho, iyo dhammaan noocyada kaamamka, maalin ama habeen. Samee foomamka diiwaangelinta khadka tooska ah, ku dar habka lacag bixinta oo aamin ah, biil otomaatiga ah ee qoyska iyo kormeer qalabka aaladda dashboardka.
Barnaamijka Maareynta Ciyaaraha - Ka bilow horyaal hal nidaam oo khadka tooska ah ah - oo ay ku jiraan horyaallada, ururada, naadiyada iyo hay'adaha maamulka qaran ee dhalinyarada iyo cayaaraha dadka waaweyn. Waxqabadka isboorti ee 'ACTIVE' wuxuu si fudud otomaatig ugu sameeyaa oo u maareeyaa diiwaangelinta ciyaartoyga, lacag-bixinta, qorista, qorista tabaruca, jadwalka ciyaarta, warbixinta, iyo emaylka isgaarsiinta
Barnaamijka Dalxiis ee Dalxiis iyo Soojiidasho - Teknolojiyada internetka iyo goobta ee isku dhafan ee buuraha barafka iyo meelaha lagu nasto, matxafyada, aquariums-ka, iyo jardiinooyinka madadaalada. Hawlgallada sifiican ugu socodsiinta barta iibka, maaraynta dhalidda, xubinnimada, iyo agabka cuntada iyo cabitaanka.
Xerada iyo Maareeyaha Fasalka waxaa loogu talagalay barayaasha iyo maamulayaasha u baahan diiwaangelinta iyo bixinta lacag bixinta fasalka ee internetka, isgaarsiinta iyo ka warbixinta xogta, iyo taageerada maareynta fasalka. Ka faa'iideyso lacag bixinta khadka tooska ah iyo xalka maamulka ee iskuulada.
Isdhaxgalka Badeecada Viralstyle
Shabakadda 'Active Network' waxay isku xirtay nidaamka diiwaangelinta ee internetka Viralstyle, si looga caawiyo dhacdooyinka wadista dakhliga badeecadaha. ACTIVE waxay la socotaa ka ganacsiga badeecada wax iibinta waxayna soo gudbineysaa aragtiyo xog ah si ay uga caawiso qabanqaabiyaasha inay go'aamiyaan dakhligooda kordhay iyadoo ay sabab u tahay iibinta badeecada, taas oo ka caawin doonta qabanqaabiyaasha inay go'aan ka gaaraan dhacdooyinkooda mustaqbalka.
Abaabulayaasha munaasabadaha ee adeegsanaya astaamaha baayacmushtarka ayaa ka dooran kara wax ka badan 20 dharka iyo xulashada agabka. Isdhexgalka ayaa u oggolaanaya macaamiisha inay soo rogaan naqshad la sameeyay, astaan, qoraal, iyo xulasho midab leh si ay ugu suurtagasho kaqeybgalayaasha inay iibsadaan shay la gaaryeelay.
Iyada oo qayb ka ah ballanqaadka 'ACTIVE' ee ah bixinta xalka dhammaystiran ee xallinta maaraynta nolosha, waxaan soo bandhignay astaantan ganacsi si qabanqaabiyayaashu ay diiradda u saari karaan waqti dheeri ah siinta kaqeybgalayaashooda waayo-aragnimo dhacdo heer sare ah iyo waqti yar oo ku saabsan baayacmushtarka iyo fulinta saadka. Sam Renouf, maareeyaha guud ee isboortiga ee Shabakada ACTIVE
Shaacinta: Maareynta Kaqeybgaleha, SHAQADA SHAQADA waa astaan ​​ganacsi oo ka diiwaan gashan Shabakadda ACTIVE
Tags: barnaamijyada moobiilka ee firfircoonshabakad firfircoondaruurta waxqabadkabarnaamijka maaraynta kaamkamaamulaha xeradaxalalka maaraynta fasalkamaamule fasalkamaamulaha fasalkaxogta dhacdodiiwaangelinta dhacdadadhammaystirkaganacsibaayacmushtarkaagiiapps mobilelacag bixinta khadka tooska ahdiiwaangelinta dugsiga internetkamaaraynta banaankasoftware maaraynta dibaddamaaraynta kaqeybgalkamaaraynta jinsiyadahasoftware maaraynta jinsiyadahaxalalka tartankamaaraynta madadaaladasoftware maaraynta madadaaladasoftware maaraynta miciinkaRFIDmaaraynta isboortigasoftware maaraynta isboortigaTUHFfayraska
Si dhakhso leh: Maxay Waxqabadka u Fure u tahay Suuqgeyaha Casriga ah